TAGRM compost hwindo rinotenderera rezvipfuyo nzou manyowa marara mu zoo
TAGRM M3000 inozvifambisa yega vhiri vhiri yekutenderera inogadzira zvirinani aerobic nharaunda yezvinhu zve organic Fermentation. Inogona kubatsira kusimudzira iyo composting zvinhu kuti uwane izere uye nekukurumidza kuvirisa uye uve unovaka muviri fetiraiza.
Kushanda Upamhi: 3000mm
Kushanda Kureba: 1350mm
Kushanda Unyanzvi: 950m³ / h
Chii chingaitika kana tikadururira mupfudze wemhuka kune zvakasikwa tisina kuuraya sainzi?
Kupisa kwakanyanya compostinginzira inoshanda yekugadzirisa zvipfuyo uye manyowa ehuku. Iyo inogona kudzikisira iyo organic chinhu mune zvipfuyo uye huku yehuku ne microorganism, zvichidaro kuburitsa yakanyanya tembiricha, kuuraya pathogenic mabhakitiriya, kugadzirisa humus yezvinhu zvakasikwa uye kugadzirisa fotereza kushanda. Fermentation michina (senge Compost Turner) yeNanning Tagrm Co, Ltd inogona kukuvadza uye kudzokororazve marara akasimba akasimba senge zvipfuyo uye mupfudze wehuku. Iyo yekuvaka michina nguva ipfupi, uye huchenjeri hwayo nhanho iri munzvimbo inotungamira pasirese.
Nhasi, TAGRM 's Kompositi Turning Machine yakashandiswa zvinobudirira kune nyika dzinopfuura zana senge Vietnam, Joridhani, Argentina, Russia, Brazil, Ecuador, Malaysia, Kuwait, Indonesia, nezvimwewo, pazvipfuyo zvavo nehuku yehuku manyowa ekushandisa zviwanikwa.
Muenzaniso M3000 Ground clearance 100mm H2
Rate Simba 80KW, 108PS） WEITOU Kumanikidzwa kwepasi 0.43Kg / cm²
Rate kumhanya 2200r / min Kushanda upamhi 3000mm Max.
Mafuta anoshandiswa 35 235g / KW · h Kushanda kukwirira 1300mm Max.
Bhatiri 24V 2 × 12V Chimiro chemurwi Triangle 42 °
chinzvimbo chemafuta 120L Mberi kumhanya L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Chinokambaira chinotsika 3140mm W2 Kumhanya kumashure L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Crawler upamhi 300mm Simbi Fudza chiteshi upamhi 3000mm
Kukura 3635 × 2670 × 3000mm W3 × L2 × H1 Kutendeuka nharaunda 2100mm min
Kurema 4000kg Pasina mafuta Dhiraivha modhi Hydraulic
Dhayamita ye roller 823mm Nebanga Kushanda chinzvimbo 950m³ / h Max.
Chikamu chikuru chemuchina we compost uchazara munzvimbo dzakashama, zvimwe zvikamu zvichazara mubhokisi kana kuchengetedza kwepurasitiki.
Kana iwe uine chero zvakakosha zvinodiwa pakurongedza, isu tinorongedza sekukumbira kwako.
Nanning Tagrm Co, Ltd.
Wechat: + 86-15177788440
Nharembozha: + 86-15177788440
WhatsApp: + 86-15177788440
Pashure: Kupisa kutengesa komputa yekugadzira muchina wezvipfuyo mhuka mupfudze
Zvadaro: CE manyowa anogadzira muchina wezvipfuyo nguruve mupfudze hwindo hweruzhowa
tsuro mupfudze manyowa
tsuro mupfudze kugadzira muchina
tsuro mupfudze musanganiswa
tsuro mupfudze manyowa muwindow
Hot Sale manyowa kugadzira muchina zvipfuwo mumwe ...
Yakachipa manyowa inosanganisa muchina wezvipfuyo hors ...
manyowa kushanduka manyowa fetiraiza manyowa makin ...
CE mupfudze kugadzira muchina zvipfuwo nguruve murume ...
China chikuru manyowa muchina zvipfuwo mhou ...
Chicken mupfudze zvipfuyo manyowa Turner kuti mak ...
NO.399, Wuxiang Avenue, Liangqing Dunhu, Nanning, Guangxi, China